Home Aragti-doon Mucjisooyiinka ay leedahay Toonta iyo faa’iidadeeda
Faa'iidooyinka toonta ee dad badan aysan ka warqabin.
Waxtarka ay leedahay toonta | Credit: Unsplash
Dhammaanteen waan ka war qabnaa in toontu ay leedahay faa’iidooyin dhowr ah oo waxtar weyn u leh jirkeenna.
Tusaale ahaan waxay dishaa gooryaanka, wasakhda ayey jirka gudihiisa kala dagaallantaa, unugyada dhiigga ayey sifeysaa, sidoo kalena waxaa loo isticmaalaa in miisaanka lagu dhimo ama la isku caateeyo.
Intaasoo dhan marka laga soo tago waxaan eegeynaa 4 mucjiso oo ay toonta si gaar ah u leedahay, wax tar weynna u leh bani’aadanka.
1- Waxay xoojin kartaa difaaca jirkaaga
Toonta waxay leedahay awood ay ku burburiso nooc walba oo bakteeriyo ah, maadaama ay ku jiraan maaddooyin si weyn ula dagaallama bakteeriyada.
Allicin waxay dabooleysaa labo qeybood oo ka mid ah unugyada jirka, kuwaas oo bacteeriyada cudurka wadata usoo fasaxa jirka bani’aadanka.
Haddii habeen kasta marka aad seexaneyso ay kuu dhawaato toon ama barkinta hoosteeda kuugu jirto waxaad dareemi doontaa in subaxdii aad firfircooni lasoo kacdo iyo in xanuunnada ay aad kaaga yaraadaan, hadduu Alle idmo.
2- Waxay kaa caawin kartaa biyaha sanka ka dareera
Sankaaga wuxuu ku nafisayaa toonta urkeeda. Sababta ugu weyn waa in toontu ay leedahay qallajiye loo yaqaanno allicin, kaasoo si tartiib tartiib ah uumi ahaan uga soo baxa toonta durbadiina la dagaallamajeermiska iyo infakshanka.
Maaddada allicon ee ku jirta toonta waxay kuu fureysaa duleelka sanka iyadoo burburineysa wasakhda isku xirtay halkaas.
Shaqada ay intaas ku qabaneyso waa mid si aayar ah u socota laakiin way u qalantaa. Muddo xoogaa ah kaddib waad ka reysaneysaa sankii qulqulka ka socday, si fiican ayaadna u neefsaneysaa.
3- Waxay eryi kartaa cayayaanka
Haddii aad tahay dadka ka cabsada caarcaarada, ama aad ka walwal qabto inay afkaaga u dhawaato inta aad jiifto, ama xitaa ay kaneeco ku cunto, waxaad u baahan tahay toon kaliya.
Toontu waxay leedahay sun dish cayayaanka, aadna ay uga fogaadaan. Gaar ahaan kaneecada aad bay u neceb tahay toonta, mana kuu soo dhawaaneyso inta ay agtaada taallo.
4- Waxay kaa caawin kartaa hurdada
Toonta waxaa ka buuxa fitamiinka loo yaqaanno B1, oo ah midka la dagaallama walwalka hurdo la’aanta u keena dadka.
Intaas waxaa sii dheer in toonta uu ka buuxo vitamin B6, oo ah daawo neerfaha dajisa hurdadana keenta.
Geedkan mucjisada ah wuxuu noo leeyahay waxtar cajiib ah, kamana maaranno. Laakiin dad badan waxay faa’iidadiisa u seegaan inta ay shiirka toonta ka cararayaan.
Xitaa dad badan ayaa aaminsan in toontu ay wax weyn ka tarto ka hortagidda iyo daweynta fayraska corona, inkastoo hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO ay sheegtay inaan arrintaas wax caddeyn ah loo heynin, dadkana uga digtay.
Previous articleSiyaasadda waxay leedahay dan joogto oo keliya!
Next article3 arrimood oo ka maqan noloshaada iyo sababta ay muhiim ugu yihiin guusha
3 arrimood oo ka maqan noloshaada iyo sababta ay muhiim ugu yihiin guusha
Siyaasadda waxay leedahay dan joogto oo keliya!
Arrimahan samee, si maalinta ciidda aad u dareemto farxad wayn